Basikety – Mada N1B Lehilahy : nisongadina ny ekipan’i Diana | NewsMada
Basikety – Mada N1B Lehilahy : nisongadina ny ekipan’i Diana
Ekipa telo avy any Diana no indray nahazo fandresena teo amin’ny andro voalohany amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja basikety, sokajy N1B lehilahy. Fihaonana, tanterahina any Antsiranana, izay nanomboka ny asabotsy 6 mEy lasa teo. Anisan’izany ny Sporting sy ny AS Douanes ary ny AS Chicago.
Ny Sporting Diana, nanamontsana ny AS Fanalamanga, avy any Alaotra Mangoro, tamin’ny isa mavesatra 100 no ho 64. Tsy niady ny fihaonana raha ny tati-baovao satria nanjaka tamin’ny lafiny rehetra ny mpilalaon’ny faritra avaratra ary nitarika anisa hatrany nandritra ny tapa-potoana efatra nilalaovana.
Nandresy tsy niady kosa ny AS Douanes, raha tokony hikatroka tamin’ny BC Tafaray. Ary lavon’ny AS Chicago, tamin’ny isa 97 no ho 53, ny BCO Boeny. Teo ho eo ihany kosa ny vokatra ho an’ny ekipan’Analamanga satria fandresena iray sy faharesena iray ny azon’izy ireo, teo amin’izany andro voalohany izany. Niondrika teo anatrehan’ny ABBS Sava, tamin’ny isa 78 no ho 69, ny CCBA Ankarana Analamanga, raha lavon’ny ECBBA Analamanga, tamin’ny isa 77 no ho 72 ny FBI Sava.